Googiliin teeknooloojii afaan mallattoo gara sagalee dubbiitti jijjiiru uume – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Hagayya 15,2011 (FBC) – Googiliin bilbila sochootuu smaart deeggaramuun teeknooloojii afaan mallattoo dubbisuun gara sagalee dubbiitti jijjiiru uumuu beeksiise.
Googiliin appilikaashiinii afaan mallattoo kana dubbisu ofiin isaaf kan hin hojjenne yoo ta’ellee, appilikeeshinii kanatti fayyadamuun haala salphaa ta’een ifa godheera.
Hanga ammaatti Sooftiweeronni akka kanaa kompiwuuteroota irratti qofaa kan hojjetan ta’uutu dubbatama.
Googiliin teeknooloojii amma ifoomse kanatti hawaasa rakkoo dhageetti qaban birratti fudhatama guddaa argateera.
Qoratoota Injiinaraa Googilii kan ta’an Vaaltiin Baazeerviisk fi Faan Zhaang akka beeksisanitti teeknooloojichi bilisaa akka ifoomuf kaayyoon isaa inni guddaan namoonni afaan mallattoon salphumatti akka hubataniif fedhii isaan qaban irraa kan ka’edha jedhan.
Dubduubeen namoota irra argame baayyee kana nama gammachiisu fi gara fuulduraatti Googiliin cimee akka hojjetuu fi akkasumaas hojii Afaan maallattoo gara sagaleetti jijjiiruu cimsee akka hojjetu beeksiseera.
Qorattoonni Hawaa pilaaneet tokko irratti bishaan argamu ifoomsaan